ချယ်ဆီးအသင်းကခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေအပေါ် ဗီဒယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ
Posted By:	Times of News January 10, 2018 0
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗီဒယ်က ချယ်ဆီးအသင်းကသူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ကို ဘာမှ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကပဲ ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့နည်းပြ ကွန်တီက သူနဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းမှာ အတူလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့ ချီလီလက်ရွေးစင် ဗီဒယ်ကို စတန်းဖို့ဒ်ခ်ျမှာ လာရောက် ကစားဖို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြောင်း ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဗီဒယ်ကတော့ ကွန်တီနဲ့ ပြန်လည်လက်တွဲဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့သာ ယခုနှစ်ရာသီမှာ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဖလားရယူနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထား ပါတယ်။ လက်ရှိချိန်မှာ ဘုိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ (၆)ကြိမ်ဆက် ဘွန်ဒက်စ်လီဂါချန်ပီယံ ဆုကို ရယူနိုင်ဖို့ ရေပန်းစားနေသလို ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း (၁၆)သင်းဆင့်ကို […]
Messi receivesareally special span of boots
An artist has motionless to re-tellastory of Lionel Messi’s career – onaspan of boots. The Barcelona star was presented withaspecial present by Paraguayan artist Lili Cantero, who palm embellishedamethod of images capturing both Messi’s family and his […]
Indonesian apportion urged to stop destroying bootleg fishing…
Livermore escapes FA permit after fan bust-up
The English Football Association have declined to take any movement opposite West Bromwich Albion midfielder Jake Livermore after he confrontedaWest Ham United fan during his club’s 2-1 better progressing in January. Livermore andaunnamed believer were concerned inaexhilarated sell when […]
ကော်တင်ဟိုအတွက် အင်စတာဂရမ်မှာ ကြေကွဲစွာရေးသားခဲ့တဲ့ ဖာမီနို
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ကစားသမား ရော်ဘတ်တို ဖာမီနိုက သူနဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းသား ကော်တင်ဟို ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းရတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဖာမီနုိုနဲ့ ကော်တင်ဟိုတို့ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ကစားခဲ့ တဲ့ အချိန်အတွင်း ရှေ့တန်းမှာ အတွဲညီညီကစားနိုင်ခဲ့သလို ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးဆက်ဆံမှု တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က ဖာမီနိုက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် မှာ “ no longerasame ” now that Coutinho is left ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကော်တင်ဟိုဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင် […]
Connelly: Inslee calls for CO tax, finale genocide penalty,…
Governor Jay Inslee Oo Booqasho Ku Yimid Abubakar Islamic Center, Seattle published: 11 Feb 2017 views: 471 Fadlan Subscribe This Channels, Ku Dhufo Xaga Sare SUBSCRIBE is diiwaan gali. Live TV, http://www.sallaxley.com/ is diiwaan gali LIVE SALAXLEY TV CHANNEL SEATTLE WA.. https://www.youtube.com/user/moee53, Ku soo Dhowaada […]
Dismantled guns, bullets cumulative for Robby Poblete Foundationa saArt of Peacea project
Dismantled – The War Inside Me published: 19 Oct 2011 views: 11653 “The War Inside Me” fromamanuscript “The War Inside Me” Support ||D||I||S||M||A||N||T||L||E||D|| http://www.dismantled.org http://dismantled.bandcamp.com You competence see me inadowntown splendid lights Trying to sell each final exhale that we have […]
Vidal unmotivated over Chelsea talks
FC Bayern München midfielder Arturo Vidal says he’s been unblushing by exit talks amid reports Chelsea have doneabid for his services. Antonio Conte has suggested his indebtedness foraChilean – whom he worked with during Juventus – and plainly certified that he’d […]
Ditengah susah payahnya Chicago Bull bersaing di papan bawah klasemen wilayah Timur, secercah harapan hadir. Zach LaVine sudah bisa memperkuat Bulls Sabtu (13/1) mendatang. Pertandingan melawan Detroit Pistons akan jadi laga quip untuk LaVine pasca cedera. Pertandingan melawan Pistons itu nantinya juga menjadi pertandingan pertama […]